Kaabaj - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani waa bog ku saabsan kaabajka. Maqaalo kale fiiri Saladh
Yurub, qiyaastii 1000 C.H
(B. oleracea Carl Linnaeus var. capitata L. f. alba DC.)
(B. oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Albert Thellung)
Kaabaj, Kaabash (Af Ingiriis : cabbage; Af carabi: ملفوف) magaca Saynis Brassica oleracea waa dhir caleen cagaaran mararka qaar casuus leh, sanadle ah (sanadkii hal mar dhasha midho), ka mid ah khudaarta caleenta duuban ee miisaanka leh. Midhaha kaabashku wuxuu sida badan u leeyahay miisaan 0.5 ilaa 4 kilogiraam (1 ilaa 9 lb), inta badan waa cagaar, casuus iyo cadaan, caleemo balaadhan oo duuban leh. Si la mid ah saladhka, khudaarta kaabashku waa mid leh caleemo badan oo isa saaran iyo isku dul duuban, kuwaasi oo iskugu xidhan hab cajiib ah.
Ilaa hada lama hayo taariikh cad oo ku saabsan meesha asal ahaan kaabashku ka soo jeedo, laakiin waxaa la ogyahay in 1,000 Ciise Hortii kaabashka lagu beeran jirey meelo ka mid ah qaarada Yurub. Xidhmada khudaarta kaabashku wuxuu ku baxaa wakhti ku dhow hal sano, goorta uu bislaado waa laga gooyaa, hadii la rabo in tafiir laga reebo qaar ayaa lagu dhaafaa carada si ay u baxaan sanadka xiga, kuwaasi oo yeesha iniinyo lagu beeri karo meelo kale.
Sida ay ku soo warantey Hay'ada Cuntada Aduunku, guud ahaan sanadkii 2011ka waxaa wadanada caalamku soo saareen ilaa 69 milyan mitir ton oo kaabash ah. Kalabadh tiradaasi waxay ka baxdey wadanka Shiinaha oo aad looga isticmaalo geedka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaabaj&oldid=167222"